महिलाले श्रीमानबाट गर्ने अपेक्षा विश्वास ! पुरुषले गर्ने अपेक्षा 'हेर्नुस' - महिलाले श्रीमानबाट गर्ने अपेक्षा विश्वास ! पुरुषले गर्ने अपेक्षा 'हेर्नुस'
महिलाले श्रीमानबाट गर्ने अपेक्षा विश्वास ! पुरुषले गर्ने अपेक्षा ‘हेर्नुस’
काठमाडौं । हुनेवाला जीवनसाथीलाई लिएर सबैको मनमा आ-आफ्नै इच्छा हुन्छ । कोही आफ्नो भविष्यको जीवनसाथी सपनाको राजकुमारलाई बनाउन चाहन्छन् , त कोही आफूले सबैभन्दा धेरै मन पराएको व्यक्तिलाई नै आफ्नो जीवनसाथीको रुपमा हेर्न चाहन्छन् ।
जसबाट उनीहरुले माया, प्रेम, विश्वास लगायतका विभिन्न कुराको अपेक्षा राख्ने गर्छन् । यस्ता अपेक्षा पुरुषहरुले महिलाबाट मात्र हैन, महिलाहरुले पुरुषबाट पनि राख्ने गर्छन् ।
कुनै पनि महिलाले आफ्नो श्रीमान् बाट गर्ने अपेक्षा भनेकै उनीहरु बीचको विश्वास हो । कुनै महिलाले आफ्नो श्रीमान् संस्कारी हुनुका साथै समझदार तथा विश्वासिलो होस् भन्ने अपेक्षा राख्छन् ।
त्यस्तै, आफूलाई बुझ्ने तथा भरोसा गर्न लायक श्रीमान्को अपेक्षा गर्छन् । उनीहरु सोच्छन्, मेरो श्रीमान् यस्तो होस्, जसमाथि मैले आँखा बन्द गरेर विश्वास गर्न सकुँ । मैले गल्ती गरे मलाई सम्झाओस् तथा राम्रो गर्दा मलाई स्यावासी दिओस् । विना गल्ती मलाई गाली नगरोस् र विना अर्थ ममाथि शंका नगरोस् । त्यतिमात्र हैन, कुनै पनि महिलाले आफ्नो श्रीमान्बाट गर्ने अपेक्षा भनेको आफ्नो कमाईमा हक नजताओस् भन्ने पनि हो ।
धेरै महिलाहको चाहना हुन्छ, मेरो श्रीमान्ले मलाई त्यसरी नै अपनाओस्, जस्तो कि म अहिले छु । मलाई कुनै पनि हालतमा परिवर्तन गर्न नखोजोस् । किनकी हरेक व्यक्तिको आ(आफ्नै विशेषता हुन्छ । र एउटालाई चित्त बुझेन भन्दैमा अर्कोलाई परिवर्तन गर्नु पक्कै पनि बुद्धिमानी हैन ।
भनिन्छ, जो मानिसले आफ्नो आमा तथा बहिनीको इज्जत गर्दैन, उसले कसैको पनि इज्जत गर्न सक्दैन । त्यसैले, विवाह गर्ने उमेर भएका हरेक महिला यस्तो पुरुषको खोजीमा रहने गर्छन्, जो महिलालाई भरपूर इज्जत तथा सम्मान गरोस् ।
विवाह वन्धनमा बाधिने पुरुष तथा महिलाहरुले आफ्नो विवाहको महत्वलाई बुझन् आवश्यक छ । जबसम्म उनीहरुले विवाहको महत्वलाई बुझ्न सक्दैनन् , तबसम्म उनीहरुले विवाह पश्चात्त सुरु हुने बाधा अड्चनहरुलाई हटाएर सौहार्द वातावरणमा जीवनयापन गर्न सक्दैनन् ।
भनिन्छ, जो आफूलाई माया गर्छन्, अरुलाई पनि उत्तिकै माया गर्छन् । महिलाहरु यस्ता पुरुष पक्कै पनि चाहदैनन्, जो आफ्नो मात्र ख्याल गरोस् वा अरुको मात्र ख्याल गरोस् । उनीहरु चाहन्छन्, आफ्नो श्रीमानले आफ्नो मात्र हैन, अरुको पनि ख्याल गरोस् ।
एउटा श्रीमतिले आफ्नो श्रीमानबाट जत्ति विश्वास मानिन्छ, पछिल्लो अध्ययन अनुसार पुरुषले पनि आफ्नो जीवनसाथीबाट त्यत्तिकै मात्रामा विश्वास मान्दै आइरहेका छन् । संसारमा सबैभन्दा सम्बन्ध बलियो बनाउने भनेकै एक अर्का बिचको विश्वास हो । समाज आफ्नो जीवनसाथीबाट एउटा पुरुषले के अपेक्षा गरेका हुन्छन् त हेर्नुस ।
हरेक पुरुषको एउटै अपेक्षा हुन्छ, उसको हुनेवाला श्रीमतिले आफ्नो पनि लाइफ इन्जोई गरोस् । उसलाई पनि इन्जोई गर्न देओस् । साथै सानो सानो कुरामा पनि खुशी भएर घर परिवारलाई पनि खुशी प्रदान गरोस् ।
हरेक पुरुषको इच्छा हुन्छ, उसको पत्नी यस्तो होस् , जो बोल्दै नबोली पनि,उसको मनको हरेक कुरा बुझ्न सकोस् ।
केही महिला आफ्नो श्रीमान्लाई त अपनाउन सक्षम हुन्छन्, तर उसको परिवारलाई भने अपनाउन सक्दैनन् । जबकी कुनै पनि महिला विवाह पश्चात्त एउटा श्रीमती मात्र हुदैन । कसैको बुहारी त कसैको भाउजु पनि हुन्छे । त्यसैले पनि प्राय जसो पुरुष आफ्नो श्रीमतिबाट यही अपेक्षा राख्छन् कि उसले आफूलाई मात्र नभएर आफ्नो परिवारका सदस्यलाई पनि पूर्णतया अपनाओस् ।
हरेक पति आफ्नो पत्नी सर्वगुण सम्पन्न भएको हेर्न चाहन्छन् । त्यसैले, उनीहरु आफ्नो पत्नीलाई लिएर थोरै आशावादी पनि हुने गर्छन् । उनीहरु सोच्छन्, मेरो श्रीमति सुन्दर तथा सुशील मात्र हैन आफ्नो जिम्मेवारी पूर्णतया निभाउने किसिमको होस् । साथै, उसलाई आफ्नो प्राथमिकताबारे जानकारी होस् ।
प्राय सबै पुरुषहरु आफ्नो परिवारलाई उत्तिकै माया गर्छन् । त्यसैले त उनीहरु यस्तो पत्नी चाहन्छन्, जसले आफ्नो माइतीका साथसाथै घरलाई पनि आफ्नो सम्झियोस् र परिवारलाई माया गरोस् ।
यो कुरा भन्न जति सजिलो छ, उत्तिकै गार्‍हो पनि । त्यसैले यसको लागि पुरुषहरुले पनि आफ्नो पत्नीको परिवारलाई आफ्नै परिवार सम्झन जरुरी छ ।
हरेक पुरुषको चाहना हुन्छ, उसको श्रीमति समझदार हुनुका साथै जिम्मेवार होस् । घर परिवारको जिम्मेवारी राम्ररी निभाओस्। र, सानो सानो कुरालाई लिएर पनि ठूलो इस्यु नबनाओस् । साथै, सफा मनको होस् । र, परिवारलाई मिठो मिठो खानेकुरा बनाएर ख्वाउने मिठो कुक होओस् , र घरको हेरचाह राम्ररी गरोस् । एजेन्सी